အတတ်ပညာ China High Pile Circular Knitting Machine နှင့် စက်ရုံ |Morton စက်ယန္တရား
သင်၏တိကျသောအထည်လိုအပ်ချက်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် High Pile မြို့ပတ်ရထားချည်ထိုးစက်ကိုသင်ရှာလိုပါသလား။
မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့ Higher Precision High Pile Circular Knitting Machine ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
1.High Pile မြို့ပတ်ရထားသိုးမွှေးထိုးစက်သည် အပူပျံ့ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် cam box ၏ အင်အားပုံပျက်ခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် စက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွင် လေယာဉ်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကို အသုံးပြုခြင်း။
2.High Pile circular Knitting Machine ကိုလည်း loop cut knitting machine ဟုခေါ်သည်။
3. ၎င်းတွင် အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် ချွတ်ထားသောအထည်များ၊ မညီညာသော pile နှင့် differential staining တို့ကဲ့သို့ ရိုးရာပြဿနာများကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် cams နှင့် needle cutters များတွင် ထူးခြားသောဒီဇိုင်းပါရှိပါသည်။
4. ဖောက်သည်များ၏ရွေးချယ်မှုအတွက် ဖြတ်ညှပ်များတွင် ဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးရှိသည်- ဆေးထိုးအပ်တစ်ခုတွင် ချိတ်နှင့်ဖြတ်စက်၊ ချိတ်နှင့် ဖြတ်စက်ကို ခွဲခြားထားသည်။
5. ဤစက်သည် မြန်နှုန်းမြင့်စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး စက်၏ output သည် သမားရိုးကျစက်အတွက်3ဆကျော်ဖြစ်သည်။
6.High Pile မြို့ပတ်ရထားသိုးမွှေးထိုးစက်သည် ကြော့ရှင်းသောအသွင်အပြင်၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး လက်တွေ့ကျသောဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် အသားပေးထားသည်။
7.စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏လည်ပတ်မှုကိုတိကျသေချာစေရန်နှင့် အထည်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသေချာစေရန်အတွက်တင်သွင်းလာသော CNC စက်များကိုအသုံးပြုခြင်း။
ဤစက်သည် ဓာတုဖိုက်ဘာပိုးစီးရီး၊ ချည်၊ သိုးမွှေးချည်သန့်သန့်နှင့် superfine ဖိုင်ဘာများအဖြစ် ယက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။နှင့် အခြား ချည်ထိုးပစ္စည်းများ။ ၎င်းသည် သန္တာလွှမ်းမွှား၊ ကြင်းလွှမ်းမွှား၊ Kirin cashmere၊ ကတ္တီပါ၊ နေကြာဆံသား၊ Peacock cashmere၊ bubble cashmere၊ ချည်သား cashmere၊ cotton cashmere/father cashmere၊ PV fleece၊သိုးမွေးသိုးမွှေး၊ super - ပျော့ပျောင်းသော cashmere နှင့် back fleece ။၎င်းတို့ကို အဝတ်အစား၊ အနားသပ်၊ အိပ်ယာ၊ အရုပ်များ၊ ဆိုဖာထည်၊ ကော်ဇော၊ စောင်နှင့် ကားကူရှင်များတွင် အသုံးချသည်။အထည်များသည် အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှုများနှင့် ကျယ်ပြန့်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဈေးကွက်၏ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ယခင်- China Three Thread Fleece knitting Machine အတွက် စျေးနှုန်းချိုသာသည်။
နောက်တစ်ခု: China High Pile Circular Knitting Machine အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စက်ရုံ